Adeegto Ethiopian ah oo Kurga ka Goysay Haweeney ay u Shaqaynaysay – Rasaasa News
Nov 19, 2011 Adeegto Ethiopian ah oo Kurga ka Goysay Haweeney u ay Shaqaynaysay, ethiopia, kuwait
Kuwait, November 19, 2011 [ras] – Adeegto Ethiopian ah oo 28 jir ah ayaa kurka ka goysay haweenay Kuwaiti ah oo 25 jir ah oo ay u shaqaynaysay, taas oo aqal gali lahayd maalintay dhimatay maalinta ka dambaysa.
Adeegto Casha, sheegtay sababata ay u dishay haweenayd in ay ahayd iyada oo si xun ula dhaqantay. Waxay tidhi “waxaan goostay in aan dilo ka dibna aan anigu is dilo mar hore, laakiin fursad ayaan u waayey oo inta badan dad baa guriga joogay.”
Casha ayaa booliska u sheegtay sida dilku u dhacay. Waxay sheegtay in ay qaadatay Faas xili ay hurdayso marxuumadu, iyada oo tidhi “waxaan kaga dhuftay laabta iyada oo qaylyaysa ayey igu soo booday laakiin kama joojin faaska ugu dambayna qoorta ayaan ka gooyey.”
“Kolkaan dilay musqushaan galay intaan makiinad qaatay, sin aan halbowe isu jaro uguna dhinto dhiig bax, laakiin waan is badalay waxaanan goostay in aan baxsado.” “Dhiigii baan iska maydhay, waan labistay, dabadeedna dharkaygii baan boorso ku gurtay, taxi baan garoonka u qaatay si aan tigidh u goosto oo aan dalka uga baxo, intaanan gaadhin xafiiskii tigidhka boolis baa i qabtay” ayey tidhi Casha.
Todobaadkii hore ayey ahayd kolkii isla magaalad Kuwait City uu Adeegto Ethiopian ah ku dilay nin Kuwaiti ah oo ay u shaqayn jirtay.